L❤DK ( 2014 ) - မြန်​မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel August 07, 2016
ကဲ MMATV Channel ကို အား​ပေး​နေတဲသူ​တွေ ဇာတ်​လမ်းတွဲချည်းပဲ ကြည့်​​နေရတာပျင်းမှာဆိုးလို့ ကြားဖြတ်​အ​နေနဲ့ Japanese Movie ​လေးတစ်​ခုနဲ့ မိတ်​ဆက်​​ပေးပါရ​စေ ...
ဇာတ်​ကားနာမည်​က​တော့ L❤DK ဟို့ အမည်​ရပါတယ်​ ... ယခု Japan ကား ကြည့်​ရှုသူများ၏ ပါးစပ်​ဖျား​တွေ ​ရေပန်​စားပြီး popular ဖြစ်​​နေတဲ့ kento ပါဝင်​ သရုပ်​​ဆောင်​ထားတဲ့ ဇာတ်​ကား​လေး တစ်​ကားပါ .... 2014 က ထွက်​ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်​ပြီး Romance , Comedy ပုံစံ ​ကျောင်းသား ကား​လေးပါ ....
ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်း​လေးက​တော့ - ရှုဇီ ဆိုတဲ့ ​ကောင်​​လေးက​တော့ ​ကျောင်းမှာအရမ်း popular ဖြစ်​​နေတဲ့ သူတ​ယောက်​​ပေါ့ .... တ​နေ့ ​ကောင်​မ​လေး တစ်​​ယောက်​က လူလည်​​ခေါင်​မှာ ရှုဇီ ကို သ​ဘောကျ​ကြောင်း ဝန်​ခံလိုက်​တယ်​ ... ရှုဇီ က​တော့ သိပ်​ဂရုမစိုက်​တဲ့ပုံနဲ့ သူမကို ထား ထားခဲ့ပါတယ်​ ... ​ပြောရ ရင်​​တော့ ​ချေတာ​ပေါ့ ... အဲ့​နောက်​ ​ကောင်​မ​လေးရဲ့ သူငယ်​ချင်း အွိုင်​ က မ​ကျေမနပ်​ဖြစ်​ကာ ရှုဇီ ကို ကွိုင်​သွားရှာရင်း မ​တောတဆ တွန်းမိပြီး ရှုဇီ ​ခြေ​ထောက်​ထိခိုက်​သွားပါတယ်​ .. အဲ့​နောက်​ အွိုင်​ က ရှုဇီ ရဲ့ ​ဝေယျာဝစ္စ ကို လုပ်​​ပေးရင်း .. ဘာ​တွေဖြစ်​လာကြမလဲ ? ဒါနဲ့ သူတို့ အ​ဆောင်​လဲ တူတယ်​ဗျ ... ကံကြမ္မာက ဖန်​လာ​တော့ တခန်းထဲ​တောင်​ တူတူ​နေကြရတာ ... အဲ့လိုနဲ့ ဘာ​တွေဆက်​ဖြစ်​လာမလဲ ? သူတို့ နှစ်​​ယောက်​ တစ်​ဦးအ​ပေါ် တစ်​ဦး ချစ်​မိသွားမလား ? ချစ်​မိသွားရင်​​ရော အရင်​က ရှုဇီ ကို ဝန်​ခံခဲ့တယ့်​ အွိုင်​ ရဲ့ BFF က​ရော ဘာ​ပြောမလဲ ? ကြားထဲမှာ ဘယ်​လို အ​နှောက်​ယှက်​​လေး​တွေ​ပေါ်လာမလဲ ? ဆိုတာကို​တော့ ဇာတ်​လမ်း​လေးမှာ ကြည့်​ရှုခံစားကြည့်​​နော်​ ....
Romance , Comedy ​ကျောင်းသား ကား​လေးမို့လို့ လူငယ်​​တွေကြိုက်​ကြမယ်​လို့​တော့ ထင်​ပါတယ်​ ... အား​ပေးကြပါဦး​နော်​ ... Japan ကားကို ပထမဆုံးအကြိမ်​ စကြည့်​ဖူးပြီး ဘာသာပြန်​ရတာမို့လို့ အမှားပါရင်​လဲ သည်းခံ​ပေးကြပါဦး​နော်​ ....
Translator : LoL
Download on pcloud (958.6MB)
Japan Manga Romance School Youth
Labels: Japan Manga Romance School Youth
94skystrapper January 16, 2017 at 8:39 AM
Small sizeလေးတင်ပေးပါလား please!
94skystrapper January 16, 2017 at 8:40 AM